Kitra – « Can 2019 » : hifandona amin’i Sao Tome Principe ny Barea | NewsMada
Kitra – « Can 2019 » : hifandona amin’i Sao Tome Principe ny Barea
Raha mbola ao anatin’ny Can andiany faha-31eo amin’ny taranja baolina kitra ny any Gabon, efa fantatra kosa izao ny ekipa hifandona amin’ny Barea, hiatrehana ny “Can 2019”. Mbola fihaonana savaranonando anefa ny hifandonantsika amin’i Sao Tomé Principe.
Tsy maintsy miatrika lalao savaranonando ny Barea vao afaka miditra amin’ny fifanintsanana eny anivon’ny sokajy, mba hiatrehantsika ny” Can 2019” hatao any Kameronina. Hifanandrina amintsika amin’izany ny ekipam-pirenen’i Sao Tomé Principe ka hotanterahina ny 20 sy ny 28 marsa 2017 izao ny lalao mandrosoa sy miverina. Hiray vondrona amin’i Sénégal, miatrika Can amin’izao fotoana izao sy i Ginea Ekatorialy ary i Soudan ny Barea raha tafavoaka amin’izany dingan’ny savaranonando izany.
Hotanterahina ny 13 jona kosa ny andro voalohany eo anivon’ny sokajy ka handranto lalao avy hatrany any an-tanin’olona ny iray amin’ny Barea na i Sao Tomé Principe.
Amin’ny taona ho avy, ny 17 sy ny 27 marsa 2019 kosa, ny andro faharoa ho an’ny sokajy misy ny Barea io raha tafakatra amin’izany isika.
Etsy andaniny, tsy anisan’ireo hiatrika izany dingan’ny savaranonando izany ireo firenena 45 voalihany taorian’ny sivana nataon’ny Kaonfederasion’ny baolina kitra afrikanina (Caf) ka mason-tsivana nijerena izany ny vokatra azon’ny ekipam-pirenena tsirairay tamin’ny fifanintsanan’ny Can sy ny fiadiana ny amboara maneran-tany, 2018.
Andrasana indray ny mety dingana ho vitan’ny Barea amin’izany hiatrehana ny “Can 2019” izany.